Dib u milicso mustaqbalka Villa Somalia: Yuusuf Garaad oo kashifay waxyaabo qarsoon oo madaxtooyada ka jira - Caasimada Online
Home Maqaalo Dib u milicso mustaqbalka Villa Somalia: Yuusuf Garaad oo kashifay waxyaabo qarsoon...
Dib u milicso mustaqbalka Villa Somalia: Yuusuf Garaad oo kashifay waxyaabo qarsoon oo madaxtooyada ka jira
Laga soo billaabo Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf Axmed, Guddoomiye Shariif Xasan iyo Ra’iisal Wasaare Cali Maxamed Geeddi, ku xiji Nuur-Cadde, Shiikh Shariif, Xasan Shiikh, Saacid Shirdoon, Cabdiweli Shiikh, Cumar Cabdirashiid iyo qaar kale oo Wasiirro u badan Madaxda Sare ee dalka soo martay intooda badan inta aanay xilka qaban waxay ahaayeen rag aan macriifo wanaagsan leennahay. Qaar aan sheeko wadaag nahay. Kuwo aan arday wada ahayn iyo qaar aan awal ku tilmaami jiray saaxiibbo dhow oo aan guryaha iyo Hoteellada isku booqan jirnay inkasta oo markii dambe aan u beddelay in ay yihiin rag aan is naqaan.
Waxaanse mar walba arkaa dad mooggan in ay siyaasaddu tahay sida aan anigu u qabo nabadeynta iyo horumarinta dalka ee mooda been sheeg, cad gooso haddii ay kuu mari weydana ka tag xishoodka oo afkaaga maal iyo wakiillada shisheeye u jil musalsal. Amaba ku dhaqaaq intaas oo dhan.
Madax kasta marka ay cusub yihiin ama marka ugu horreysa ee uu la kulmo waa wuxuu ku dayaa in uu rabbeeyo si uu baqdin-gelin ugu maalo. Amaba si ay isaga gacanta ugu galaan. Mararka qaar waa ay u martaa.
Waxaan rajeynayaa in Hoggaamiyayaasha cusub ee Soomaaliya ay iska caabbin doonaan dadka aan dalka u shaqeyn ee ka shaqeysta. Kuwo awoodda cillanaadka ah ee aan la taaban karin ku hanjaba. Iyo kuwo ku xooma Hoggaan kasta, fahamsiiya in uu yahay Mahdigii la sugayay, u tusa in ay ayagu yihiin kuwii ka badbaadin lahaa khataro ay ayagu madaxiisa ku sawireen, marka ay sharafta ka dhaamaan, sida liinta u miirtaan, gufarka tuura si ay u helaan liin warmoog ah oo oo ay listaan.
W/D: Yuusuf Garaad Cusub